सप्तरीको बोदेवरसाइन नगरपालिका–५ जाजरमा शनिबार मुस्लिम समुदायको धार्मिक सम्मेलन हुँदैछ । करिब २ लाख मुस्लिम धर्मालम्बीले सहभागीता जनाउने ठानिएकाे सम्मेलनकाे सम्पूर्ण तयारी पूरा भएकाे आयोजकहरूले जनाएका ...
चीनको हुबेई प्रान्तमा रहेका नेपालीको उद्धार गर्न सरकारले आज जहाज पठाउँदैछ । कोरोना भाइरसको त्रासले स्वदेश आउन चाहेका एक सय ८५ नागरिसक लिन सरकारले विशेष तालिमप्राप्त टोलीलाई शनिबार जहाजसहित चीनको हुबेई...
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन स्थगित
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज गर्ने भनिएकाे संसद् सम्बोधन स्थगित भएको छ । नेपाली काँग्रेसबाट प्रदेश ५ को प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित रुपन्देहीका दुर्गाप्रसाद उपाध्यायको निधन भएपछि संसद...
काँग्रेसद्वारा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन स्थगित गर्न माग
काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले प्रधानमन्त्रीद्वारा गर्ने भनिएकाे संसद् सम्बोधन स्थगित गर्न माग गरेको छ । सरकारको दुई वर्ष कार्यकाल पुगेको अवसरमा शुक्रवार प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनि...
इन्दिरा शर्मा वि. स. २०२६ असार १६ गते मोरङको सिज्वा वडा ७ को सामान्य परिवारमा जन्मिएकी थिइन् । उनका पिता रामप्रसाद र आमा बुधमाया पोखरेलका दस सन्तान इन्दिरा साहिँली छोरी हुन् । रामप्रसाद र बुधमायाका द...
बझाङ । जिल्ला हुलाक कार्यालय बझाङका कार्यालय प्रमुख रणबहादुर कठायतलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नियन्त्रणमा लिएको छ । हुलाक बचत बैकको रकम अनियमितता आरोपमा कठायतलाई आयोगको केन्द्रीय कार्यालय ट...
देशभर निर्माणाधीन पुलमध्ये १८४ पुल समस्याग्रस्त बनेका छन् । रणनीतिक सडकभन्दा स्थानीय पुलमा समस्या बढी भएको जनाइको छ । निर्माण व्यवसायीकै कारण पुल निर्माणमा सबैभन्दा बढी ढिलाइ हुने गरेको सडक विभागल...
जनचाहना अनुसार सरकारले काम गरेको छ- मुख्यमन्त्री गुरुङ
स्याङ्जा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले अमूर्त कुरा गरेर क्रान्ति नहुने बताएका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) स्याङ्जाद्वारा ‘जनआन्दोलन तथा जनयुद्धका शहीदको स्मृतिमा स...
प्रजातन्त्र र निर्वाचन दिवस मनाइने
झापा । झापामा ७० औँ प्रजातन्त्र तथा चौथो निर्वाचन दिवस भव्यरुपमा मनाउने तयारी गरिएको छ । बिहीबार बसेको जिल्ला समारोह समितिको बैठकले आगामी फागुन ६, ७ र ८ गते ७० औँ प्रजातन्त्र र निर्वाचन दिवसलाई भ...
जिल्ला प्रहरी कार्यालय (जिप्रका) सिन्धुलीमा कार्यरत एक प्रहरी जवानले आफैँलाई गोली हानेका छन् । महोत्तरी घर भई जिप्रकामा कार्यरत प्रहरी जवान चन्द्रकिशोर रायले आज आफैँलाई पेटमा गोली हानि ग...
चितवन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भरतपुर महानगरपालिका–२२ ले पटिहानीमा नवनिर्मित ‘अम्ब्रेला स्ट्रिट’ को शुभारम्भ गरे । बिहीबार शुभ...
काठमाडौं । भ्यालेन्टाइन डे अर्थात प्रणय दिवस आज, नेपालसहित विश्वभर मनाईंदै छ । हरेक वर्ष १४ फेब्रुअरीलाई प्रणय दिवसका रुपमा मनाउने गरिन्छ । पश्चिमा देशमा प्रचलित रहेको प्रणय दिवस पछिल्ला केही दशकदेखि...
काठमाडौं । विश्वमा आतंक मच्चाईरहेको नोवेल कोरना भाइरसको प्रभावबाट नेपाल पनि अछुतो छैन । नेपाल सरकारले कोरना प्रभावित चीनियाँ क्षेत्रमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई लिन शनिबार विमान पठाउने भएको छ । वायुस...
पूर्वप्रधानसेनापति क्षत्रीको सम्पत्ति छानविन गर्न माग
काठमाडौं । संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाली सेनामा हुने भ्रष्टाचारको विषयमा समेत छानविन गर्ने भएको छ । नेपाली सेनाका पूर्वप्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीमाथि काठमाडौं–निजगढ द्रुत...
बिएण्डसी मेडिकल कलेजका सञ्चालक प्रसाईँ तारेखमा छुटे
काठमाडौँ । बिएण्डसी मेडिकल कलेज सञ्चालक दुर्गा प्रसाद प्रसाईँ तारेखमा छुटेका छन् । प्रसाईँ बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुर पुगेर तारेखमा छुटेका हुन । चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्...
कोरना भाइरस नेपाल भित्रन नदिन डब्लुएचओसँग सहकार्य आवश्यक- अध्यक्ष बिजुक्छे
काठमाडौं । नेपाल मजदूर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छेले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनसँग सहकार्य गरी ‘कोरोला भाइरस’ नेपाल भित्रिन नदिन सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । भक्तपुर नगरपा...
सञ्चार क्षेत्र छाडा भयो, सामाजिक उत्तरदायित्व बिर्सियो– मन्त्री बस्नेत
जाजरकोट । वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सञ्चार क्षेत्रले राज्यलाई रचनात्मक खबरदारी गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले भने,“सञ्चार क्षेत्र छाडा भएमा त्यो सन्देश आम पाठकमा राम्रो पर्दैन । सञ्...
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनयुद्धबाट प्राप्त उपलब्धीको संस्थागत गर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन । बिहीबार जनयुद्ध दिवसको अवसरमा अध्यक्ष प्रचण...
जनयुद्ध दिवसमा नेकपाले गरेको कार्यक्रममा गएनन् ओली
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टीले आयोजना गरेको 'जनयुद्ध दिवस'मा अनुपस्थित भएका छन् । पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा भएको कार्यक्रममा कार्यका...